तरकारी अचारमा पड्काउने मेथीका यति धेरै फाइदा ? – Nepali Health
तरकारी अचारमा पड्काउने मेथीका यति धेरै फाइदा ?
२०७४ भदौ ३० गते ८:०४ मा प्रकाशित
भान्सामा तरकारी अचार बनाउँदा प्रायः मेथीका दाना पड्काउने गरिन्छ । त्यसका साथै यसको पातलाई सागको रूपमा तरकारी बनाएर खाने चलन पनि छ । मेथी शारीरिक स्वास्थ्यका लागि धेरै फाइदाजनक छ । पोषणविद्हरूको दाबीअनुसार यसको नियमित सेवनले धेरै समस्याबाट छुटकारा पाइन्छ । यदि तपाईं यसको गुण थाहा नपाई सेवन गरिरहनुभएको छ भने अब थाहा पाउनुहोस् यसका फाइदाहरू :
कब्जियत हुन दिँदैन : खानपिनको सौखिनहरूलाई प्रायः पेटको समस्या भइरहेको हुन्छ । त्यसमा पनि कब्जियत र ग्यास्ट्रिकको बढी समस्या भएको पाइन्छ । मसलेदार खाना खाइसकेपछि मेथीको साग खाने गर्दा पाचन प्रणालीलाई सहज बनाउँछ र पेटमा ग्यास जम्न दिँदैन ।
पेट दुखाइ कम गराउँछ : भइरस र ब्याक्टेरियाले पेटमा हुने दुखाइलाई कम गर्न मेथीको सेवन गर्दा राम्रो हुन्छ । यस्तो दुखाइ प्रायः बच्चामा बढी हुन्छ । त्यस्तो वेला दुखाइ हुँदा मेथीको पातको रस निकालेर प्रत्येक दिन एक चम्चा खुवाउँदा समस्या समाधान हुन सक्छ ।
कपाल चम्किलो बनाउन : मेथीको पातको पेस्ट बनाएर कपालमा लगाउँदा धेरै लाभदायक हुन्छ । पातलाई पिसेर कपालमा लगाउँदा कपाल कालो, बाक्लो हुनुका साथै टल्किने पनि हुन्छ । यसका साथै कपाल झर्ने समस्याबाट मुक्ति पाइन्छ । मेथीले कपाललाई चायाबाट पनि मुक्ति दिन्छ ।
मधुमेहलाई नियन्त्रण गर्छ : मधुमेहका बिरामीले मेथी सेवन गर्दा फाइदा हुन्छ । दैनिक रूपमा मेथीको पातको रस बनाएर खाँदा शरीरमा ग्लुकोजको मात्रा नियन्त्रण गर्छ ।
तौल घटाउँछ : मेथीको सब्जी वा यसको दाना दैनिक सेवन गर्नाले तौल नियन्त्रणमा राख्न मद्दत गर्छ । यसले शरीरमा भएको बोसोको मात्रालाई बिस्तारै कम गर्दै लान्छ । बोसोको मात्रा कम भएपछि शरीरको तौल आफैँ कम हुन्छ ।
रुघाखोकीबाट जोगाउँछ : मेथीको सेवनले रुघाखोकी लाग्नबाट बचाउँछ । दैनिक आफूलाई मन लाग्ने तरिकाले मेथीको सेवन गर्दा हुन्छ । यसले रुघाखोकीका साथै अन्य स्वास्थ्य समस्याबाट पनि जोगाउँछ ।
ज्वरो आउँदा हुने दुखाइ हराउँछ : रुघाखोकी, ज्वरो आउँदा मानिसको शरीर पनि दुख्छ । त्यो दुखाइलाई कम गर्न मेथीको दाना वा पात सेवन गर्नुपर्छ । मेथीमा रोगप्रतिरोधात्मक शक्ति बढाउने तत्व हुन्छ र त्यसले दुखाइ कम गर्छ ।
कमला भट्टराई मृत्यु प्रकरण : ओम अस्पतालले तिऱ्यो पच्चीस लाख
नवजात शिशुको नि:शुल्क उपचार गर्न सरकारले छुट्यायो ११ करोड